Nekukurumidza: Nei Performance iri Kiyi yeiyo Smart Marketer | Martech Zone
Nekukurumidza: Nei Performance iri Kiyi yeiyo Smart Marketer
China, Gunyana 29, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kuti ubudirire mune yanhasi inokurumidza kufamba uye yekupedzisira-mushandisi yakatarisana nharaunda, vashambadzi vanoda inokurumidza, yakachengeteka, inogadziriswa mhinduro inogona kuendesa zvirimo munguva chaiyo. Chimbichimbi papuratifomu inomhanyisa mawebhusaiti uye nhare mbozha nekusundira zvemukati padhuze nevashandisi vako, zvichipa zviitiko zvakavandudzwa uye zvakachengeteka pasirese. Kiyi yekushambadzira kwakanaka kuri kuisa pamberi pekuita kuvandudza shanduko.
Nekukurumidza Solution Kuongorora
Kurumidza ndeye content delivery network (CDN) iyo inopa mabhizinesi kutonga kwakazara pamusoro pekuti vanoshandisa sei zvemukati, zvisati zvamboitika kuwana kune chaiyo-nguva kuita analytics uye kugona kuchengetedza zvisinga fungidzike zvinoshandura zvemukati (senge mitambo mamakisi kana mitengo yemasheya) kumucheto.
Vanokurumidza vatengi vanoita zvemadhijitari zvemukati zvakaita semavhidhiyo anotenderera, mapeji echigadzirwa, zvinyorwa, nezvimwewo zvinowanikwa kuburikidza nemawebhusaiti avo uye yavo yeInternet-inowanikwa (inomiririrwa) application programming interfaces (APIs). Mutengi anogona kugadzira zvemukati (zvemutengi-zvinogadzirwa zvemukati) senge peji nyowani yechigadzirwa kana vhidhiyo, sezvingaite vashandisi vekupedzisira vatengi (senge mushandisi-inogadzirwa makomendi). FastN's CDN yobva yaita kuti kutapurirana kweizvozvo zvemukati kuve kwakanyanya nekuchengetedza kwenguva pfupi makopi munzvimbo dzepakati padyo nemushandisi wekupedzisira. Maitiro ekuchengetedza aya makopi anozivikanwa se "caching," kubvisa yechinyakare zvemukati zvinonzi "purging," uye nzvimbo dzeseva dzavakachengetwa dzinonzi "PoPs."
Nekukurumidza unoisa masumbu emaseva e cache munzvimbo yakakosha yenzvimbo, imwe neimwe inonzi senzvimbo yekuvapo (PoP). Imwe neimwe POP ine sumbu re Fastly cache maseva. Kana vashandisi vekupedzisira vakumbira zvemutengi zvinhu zvemukati, Vanokurumidza kuvanunura kubva kune chero nzvimbo dzenzvimbo dziri padyo padyo kune wega wekupedzisira mushandisi.
Kurumidza masimba makumi ezviuru emawebhusaiti emakambani ari muhukuru kubva kudiki uye epakati-saizi bhizinesi kumadhipatimendi emabhizimusi makuru, kune akasiyana maindasitiri (kusanganisira kushambadzira kwedigital, e-commerce, vhidhiyo yepamhepo & odhiyo, SaaS, uye kufamba & kugamuchira vaenzi) . Vatengi varipo vanosanganisira Twitter, Hearst, Stripe, GitHub, BuzzFeed, KAYAK, Dollar Shave Club uye About.com.
Nei vashambadziri vachifanira kutarisira nezveCDNs
Dare rekuvandudza rinotsamira pakuvaka zvinhu zvinorema uye zvekupedzisira, nepo kushambadzira kuchida chinhu chikuru chinotevera - uye chaichiida zuro. Kumhanyisa peji uye kuita kwakakosha kune yekupedzisira-mushandisi ruzivo; saka zvikwata zvebudiriro zvinofanirwa kunge zvichishandisa zvemukati zvekutumira network (CDN). Pane zvikonzero zviviri zvinoita kuti vashambadziri uye IT vafarire nezveCDNs:
MaCDN anobatsira kugadzirisa shanduko yevatengi
Zvidzidzo zvinoratidza kuti kunonoka kutakura nguva ndiyo nhamba-chimwe chikonzero chekuti vanopfuura makumi manomwe kubva muzana vevatengi vepamhepo vanosiya ngoro. Maererano neimwe ongororo, "zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevatengi vekuUK uye vanopfuura hafu yeavo vari muUS vachiti nzvimbo inononoka kuita ndicho chikonzero chepamusoro chekuti varege kutenga". CDN inogona kukwidziridza peji rekutakura nguva uye kudzikisira latency yewebhusaiti yako, iyo inozopawo mukana wekutungamira kwakanyanya kutendeuka. Kuvandudzwa kwemutoro nguva kunogona kureva mutsauko pakati peasysmal uye yakanaka mushandisi ruzivo kana uri pane inononoka nhare yekubatana.
Inokurumidza kugadzirira CDN yayo kupa zvikwata zvekusimudzira kutonga kwese pamusoro pekuti vanoshandisa sei zvemukati, zvichivabvumira kuti vave nechokwadi chekuti vatengi vepamhepo vanogona kuona - uye, zvinotonyanya kukosha, kutenga - zvigadzirwa zvinobudirira. Nekukurumidza maCDN anochengetera zvemukati pamaseva emucheto, zvinoreva kuti kana mushandisi akabaya padhuze pawebhusaiti yako, chikumbiro chavo chinongofanirwa kuenda sekuseva munzvimbo iri padyo navo, kwete nzira yese yekudzokera kuseva Yekutanga (ingave yakanaka kure nekwave iko vashandisi vako). A kuongorora kwezvino vakawana kuti 33% yevatengi kashoma kuti vatenge kubva kune kambani online kana vakaona saiti kusashanda zvakanaka uye kuti 46% ichaenda kune vanokwikwidza mawebhusaiti. Nekuda kwekuona chiitiko chakanaka uye nekuwedzera zvakanyanya mukana uyo mutengi achadzokera kune yako webhusaiti mune ramangwana, zvemukati zvinofanirwa kuendeswa kune vashandisi nekukurumidza sezvazvinogona.
Dhata kubva kuCDNs inogona chaizvo kuzivisa yako yekutengesa nzira
Omnichannel chitoro chiri kuita chinzvimbo quo; vatengi vanotsvaga zvinhu online uye pane nhare vasati vaenda kuchitoro chemuviri kunotenga. Sekureva kwaAdweek, 81% yevatengi vanotsvaga pamhepo vasati vatenga, asi 54% yevatengi vepamhepo vanoda kuona chigadzirwa vasati vatenga. Tichifunga nezve maitiro aya, vatengesi vanofanirwa kuona kuti zvinobudirira sei kushambadzira pamhepo (maemail, promos, shambadziro uye vezvenhau) maererano nekubatana nekutengesa kwechitoro.
CDN inogona kubatsira kuzivisa epamhepo nzira dzekushambadzira, ichipa zvikwata kuoneka mune kushambadzira kwepamhepo kunotsigira mukutengesa kwechitoro, uye kuita kuti nhanho dzekuswededza padhuze Ne Fastly's GeoIP / Geography Detection, vatengesi vanokwanisa kuenzanisa peji maonero echimwe chinhu uye kuratidza kuwirirana pakati pekutsvaga online nekutenga muchitoro. Semuenzaniso, vatengesi vedigital vanogona kushandisa Fastly tekinoroji kune geo-fenzi kune imwe nhamba yemamaira kutenderedza chitoro, uye tarisa pane peji rekutarisa analytics kwechinhu chakatarwa. Yekutengesa-muchitoro inogona kuenzaniswa uye kupesaniswa neanoonekwa pamapeji epamhepo kuona kana paine hukama pakati pekuona shopper online uyezve kutenga muzvitoro, uye vatengesi vanogona kugadzirisa ekushambadzira zvinoenderana.
Beaconing kunyorera kunoshandiswa kuunganidza dhata nezve maitiro evatengi uye tarisa vatengi zvichibva pane zvavanofarira, padhuze, nezvimwewo kuwedzera kubatanidzwa - zvakakosha zvinhu zveyazvino nzira yekutengesa. Kushandisa CDN ine macache emukati kumisikidza mabhatoni ekutevera padyo nemutengi kunogona kukurumidza kuendesa kunyorera uye kurerutsa kuunganidzwa kwedhata rakakosha rekushambadzira.
Performance maturusi ekutarisa anobatsirawo
Kana iwe uri mhando yemushambadzi uyo anogara achimhanyisa mishandirapamwe uye kuongorora kweA / B, iwe unofanirwa kunge uchitarisa kuti basa rako riri kukanganisa mashandiro ewebhusaiti yako.
Webhu kuita kwekutarisa maturusi anogona kubvumidza vashambadziri kuti vatarise zvese zvemukati pane webhusaiti uye nhare dzekushandisa Zvishandiso izvi zvinokutendera iwe kuyedza uye kuwana analytics pazvinhu zvese zvesaiti yezvivakwa, zvinosanganisira dhata senge nguva dzekubatanidza, mhinduro yeDNS, nzira yekuteedzera, nezvimwewo. Neyokugadzira maitiro, nzvimbo dzinogona kuyedzwa kubva ku "yakachena lab" nharaunda, iyo inonyanya kubatsira kana uchiedza kuona kuti nyowani ficha yakawedzerwa kune peji (senge kushambadzira kana yekutevera pixel) inokanganisa mashandiro enzvimbo yako yese, uye nekudaro sarudza kana ichizonyatsopa yakanaka ROI. CDN yemazuva ano inogona kumhanyisa uye kugadzirisa kuyedza kweA / B, ichibvumira vashambadziri kuti vaone mhedzisiro munguva chaiyo vachichengetedza zvakakwana saiti mashandiro.
Vatengesi zvakare vanowanzo wedzera "wechitatu-bato" zvinhu kune yavo webhusaiti kana nharembozha - zvinhu senge zvemagariro media plugins, vhidhiyo plugins, ekuteedzera mataki, uye kushambadzira. Asi mhando iyi yechitatu-bato zvemukati zvinogona kazhinji kudzikisa saiti kuita. Uyu ndiwo mumwe muenzaniso wakanaka wekuti nei kuongorora kwekuita kuchikosha - kuitira kuti ma plugins uye ma-add-on ari kushandiswa pawebhusaiti arege kuikonzera kutakura zvishoma kana kupaza.
Zvemukati-kuendesa network kesi yekudzidza - Stripe
Stripe ipuratifomu yekubhadhara inoitisa mabhiriyoni emadhora pagore kwemazana ezviuru emakambani, kubva kuchangobva-kutangwa kutanga-ups kumakambani eFortune 500. Nekuti kubvuma mari ndiro hupenyu wehupenyu chero bhizinesi, Stripe yaida nzira inoshanda yekushandira yavo yekumusoro midziyo nekukurumidza vachichengetedza chengetedzo kune avo vashandisi. Mukusarudza CDN, Stripe akatsvaga mudiwa aigona kuvabatsira kuchengetedza kutendeseka kwakakwirira uye zvakare vachigadzirisa mashandiro. Stripe yakashandukira kuKurumidza, iyo yavakawana iri nyore kwazvo kugadzirisa uye yakapa yakanakisa rutsigiro rwevatengi.
Kukasira kugona kumhanyisa zvine simba zvemukati uye cache zvimisikidzo zvakabatsira kudzikisa nguva yekuremerwa kweStripe Checkout (fomu yekubhadhara isingagadzirisike yedesktop, piritsi uye nharembozha) inopfuura 80% Izvi zvakashandurwa kune zvakakosha mabhenefiti evashandisi vaStripe: kune wekupedzisira-mutengi pane nharembozha, ndiwo mutsauko pakati peyakaipisisa yekutenga ruzivo uye yakanaka. Mabhizinesi anoshandisa Stripe munzira dzakasiyana siyana, asi kubhodhi kugutsikana kwavo neStripe kwakakwirira - uye ruzivo rwavanopa kune vatengi vavo rwakanyanya - kana mashandiro ari nani zvakanyanya.
Wona iyo Nyaya Yekudzidza
Tags: Cdncdn kesi yekudzidzacontent delivery networknekukurumidzamutambokuongorora kwekuitamutsetsewebhusaiti kuita